Atileetonni Itoophiyaa Xaaliyaanitti mo'atan
Waggaa waggaadhaan Xaaliyaan magaalaa, Tireentootti kan adeemsifamu dorgommiin atileetiksi biyyooleesaa Jiiroo Alsaas jedhamu ALA bara 1945tti jalqabame.
Dorgommicharrattis atileetota dhirootaa qofatu hirmaata. Kan baranaa dabalate yeroo 72f adeemsifameera. Baranas Dilbata darbe haala miidhagaadhaan adeemsifameera.
Dorgommii kanarratti atileetoonni injifatan badhaasa olaanaa waan badhaafamaniif atileetoonni addunyaarratti beekaman marti falmii cimaa taasisaniiru.
Fiigicha kiloo meetira 10 kan daandiirratti adeemsifame kanatti atileetoonni Itoophiyaa kanneen biyyoota biroo osoo of jiddu hingalchin tartiibaan tokkoffaadhaa hanga sadaffaa ba'uun mo'ataniiru.
Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 16ffaa Ingiliz, magaalaa Landanitti adeemsifameetti fiigicha meetira kuma shaniin Moo Faaraah mo'achuun kan dinqisifatame Muktaar Idiriis ammas tokkoffaa ba'uun olaantummaa goonfateera.
Muktaar tokkoffaa kan ba'e dorgommicha daqiiqaa 28:54n yoo ta'u dorgomichas yeroo sadaffaaf mo'achuun isaa beekameera.
Akkasumas, Atileet Xilaahuun Haayilee daqiiqaa 28:55n lammaffaa yoo ba'u, Atileet Hasan Haajii ammoo daqiiqaa 29:13n sadaffaa ba'uun Itoophiyaan olaantummaa akka argattu taasisaniiru.
Muktaar wayita dorgommii kana xumuru akka ibseetti, “dorgommii kanaaf shaakala olaanaa gochun injifannoo koof na gargaareera. Dandeettiin koos yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufudhaan shaampiyoonaa addunyaa ta'uun jireenya koo geeddareera” jedheera.
Guyyaa dorgommiin kun itti adeemsifame sana lammiileen Itoophiyaa kan achi jiraniifi ummanni magaalattii daandii bitaa mirga dhaabachuun atileetoota keenyaaf hamilee kennaniiru.
Torban kana/This_Week 33775
Guyyaa mara/All_Days 1625570